Iintsuku ezi-4 ezilahlekileyo kwi-Intanethi | Martech Zone
NgeCawa, nge-25 kaJanuwari 2009 NgoLwesibini, Oktobha 4, 2011 Douglas Karr
Ukusukela ngorhatya lwangoLwesithathu, eli lixesha lokuqala ndikwazile ukuhlala phantsi ndaze ndajonga kwiscreen sam. NgoLwesine umkhuhlane wam waqala kwaye iiyure ezingama-48 ezalandelayo yayiligama eligcweleyo lokuzama ukugcina ulwelo oluninzi olwakugxothwa emzimbeni wam.
Ndiva ngathi inyanga igqithile:
Amashumi amawaka eetweets.
Ukutya okungafundwanga okungama-3,967 kumfundi wam wesondlo.
I-imeyile ezingama-242 kwibhokisi yam engenayo.
I-imeyile ezingama-73 kwibhokisi yam yangaphakathi.
Izimemo ezingama-22, izicelo zabahlobo eziyi-8 kunye nezinto ze-inbox ezingama-28 kuFacebook.
I-voicemails ezi-5 kwifowuni yam ephathekayo.
I-voicemails ezi-2 kwifowuni yam yasemsebenzini.
Ndiphose iyure yolonwabo kunye noMongameli wenkampani endandiyisebenze kwiminyaka eyadlulayo.
Uninzi lwabantu luyazibuza ukuba umntu angayibamba njani yonke le nto kwaye enze ikhondo lomsebenzi kumajelo asekuhlaleni. Ukuphulukana neentsuku ezi-4 zomfutho kunye nokungaguquguquki kuya kuthatha inani lazo kubakhenkethi, inani lababhalisi endinalo, kunye nenani leTwitterer elindilandelayo- kungathatha iiveki ukubuyisa loo manani.
Kunzima kakhulu ukugcina oku kunokuba uninzi lwabantu lucinga… mhlawumbi nangaphezulu kunokuba bendicinga! Ndade ndaneefowuni ezinomsindo ezivela kubantu besithi abanakundibamba ikhona phakathi. Owu ndinqwenela ukuba igumbi lam lokuhlambela libe ne-teleconferencing.
Ngaba ngebengazange bamangaliswe.
Ndiyavuya ukubuyela ezweni labaphilayo. Kwaye "hayi enkosi!" kuloo mbono wokunxibelelana ngomnxeba. Kukutya okukodwa okufanele kuhlale kumnyama ngonaphakade!
Kulungile ukukubona ukwenzile kwelinye icala lokuhlambela-oko kuthetha.
Ndicinga ukuba umfutho owoyikisayo owakhele ixesha elingaphezulu uya kuqinisekisa islingling ekhawulezileyo ukubuyela kwisali yoluntu.
Ndiyavuya ukuva ukuba ulungisiwe ukuba awulungiswanga. 🙂
Yithathe njengentsikelelo ukuba ungafakwanga kuludwe kwizinto ezininzi ezenziwa ngombane. Wamkelekile kwilizwe lezilumkiso, iifowuni zeselfowuni, ii-tweets ezingapheliyo kunye nexesha elibekiweyo. Siyakwamkela emva.
Ndiza kuhamba okwesibini kwi-BNPositive's motion on teleconferencing.
Ndinombulelo omtsha ngomsebenzi ojongana nawo mihla le. ngethamsanqa ukubamba, ndiyathemba ukuba uziva ngcono.
Jan 26, 2009 kwi-8: 55 AM
Kwaye ngoku unokongeza kuluhlu lwakho "amagqabantshintshi e-4 oza kufunda ngale posti yebhlog". Ndiyathemba ukuba uziva ungcono!